Prof. Cali Khaliif oo socdaal qarsoodu oo dhinaca dhulka ah ku gaaray magaalada Hargeysa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Prof. Cali Khaliif oo socdaal qarsoodu oo dhinaca dhulka ah ku gaaray magaalada Hargeysa - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Cali Khaliif Galeyr Goobjooge.com
Cali Khaliif Galeyr oo shalay loo diiday inuu ka dhoofo magaalada xarunta u ah maamulkiisa ee Buuhoodle ayaa safar dhulka ugu socdaalay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland.
Wararka ayaa sheegaya in Cali Khaliif ay isku dhaceen maleeshiyada maamulkiisa oo si weyn uga horjeeda isbedelka siyaasadeed iyo heshiiska uu la galay Somaliland, waxayna diideen inuu ka baxo Buuhoodle
Cali Khaliif oo madaxweyne u ah maamulka Khaatumo ayaa si qarsoodi ah safarkiisa u wareejiyay dhinaca dhulka, waana markii ugu horeysay ee uu ku dhex socdaalo dhulka ay ka taliso Somaliland.
Waxaa la xaqiijiyay in Cali Khaliif uu gaaray magaalada Burco aroortii, isla markaana halkaasi soo dhoweyn loogu sameeyay isagoo kadibna u sii gudbay magaalada Hargeysa, halkaasoo uu goor dhoweyd gaaray.
Previous articleProf. Cali Ismacil Samatar: “Khalad weyn ayuu Farmaajo ka galay taariikhda Soomaalida..” DHAGEYSO
Next articleWararkii ugu danbeeyay ee ololaha Doorashada & Gorgortanka codadka xildhibaanada